အောင်မြင်သောလိင် - နေ့ ၅၇: -) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
အောင်မြင်သောလိင် - နေ့ ၅၇: -)
ဒီနေရာမှကောက်နုတ်ချက် ခံစားချက်ဇယားတွေနဲ့တစျခုလုံးကို reboot ၏အနှစ်ချုပ်,.)
MO ၏နေ့ ၅၇ ရက်၊ မ P ၏နေ့ ၆၄ - အောင်မြင်သော၊ သာမန်၊ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ကွန်ဒုံးနှင့်ပါ။
သမိုင်း - ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမနှစ်သက်ခဲ့ဖူးပါ။ မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတစ်ခါမှမပြုလုပ်ဖူးပါ။ မကြာခဏဆုံးရှုံးမှုစိုက်ထူအပေါ်တင်သောစိုက်ထူ။ တစ်ချိန်ကအတွင်းအပြင်မကြာခဏဆုံးရှုံးမှုစိုက်ထူ။
နောက်ဆုံးညဥ့်: ကွန်ဒုံးထွက်ရတဲ့အနေဖြင့်လိင်စတင်ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံပေါ်မှချောဆီအရည်ကြည်ချပြီး, အချောဆီအရည်ကြည်ရတဲ့မှတဆင့်ချောဆီအရည်ကြည်လိုအပ်ရှာတွေ့စဉ်ခိုင်မာသော🙂ပေါ်တွင်ကွန်ဒုံးချပြီးအဖြစ်ခိုင်မာသောနေ၏။ စံပြတောင့်တင်း🙂ကျွန်မရဲ့စိုက်ထူနှင့်အတူအားလုံးတစ်နည်းနည်းနဲ့ပဲကကွန်ဒုံး shenanigans အားဖွငျ့အကြှနျုပျနှငျ့အတူနေဖို့မယ်လို့သိရုံဒါမှသဘာဝအများနှင့်ဖွင့်ခံရဆက်နွယ်နေကြောင်းကြီးနှင့်ဒါညာဘက်ခံစားရတယ်။
လိင်ဆက်ဆံမှုဟာကွန်ဒုံးမရှိဘဲနဲ့လိင်တူဆက်ဆံတာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ယာဉ်မောင်းနှင်မှုများပြားလာခြင်း၊ အရင်ကတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးတဲ့သူနဲ့ကွန်ဒုံးနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားစေရန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်၊ ကွန်ဒုံးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျဆင်းသွားသည်နှင့်မထိုက်တန်ပါ။ သို့သော်ယခုငါအကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အတွေ့အကြုံကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောပြရန် happy ပျော်နေသည်
အော်ဂဇင်ကိုယ်နှိုက်ကအလွန်အားကောင်းတဲ့၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ပူမိသည့်အရာတစ်ခုမှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းသည့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါ။ တကယ်တော့ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုပင်မစဉ်းစားခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်သာမန်အားဖြင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်တူသည်။ ငါရောက်လာသောအခါ, ငါ့ ဦး ခေါင်းကိုပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းနှင့်ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုသွေးကြောများဖေါက်ခြင်းနှင့်ငါ '' 8 FUCKING အပတ် !! '' မအော်ဘဲ ငါထင်လိမ့်မယ်တူသောသူမ၏နားရွက်၌။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်လှပပြီးရင်းနှီးသော၊ အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောလိင်ဖြစ်သည်
ယောက်ျားများ, ဒီမှာကပ်။ သင် ဦး တည်ကြိုးပမ်းနေသည့်ရည်မှန်းချက်မှာတကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀% ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရန်လိုအပ်ပြီးစိတ်ပျက်စရာမရှိပါဟုကျွန်ုပ်အာမခံပါသည်။ ဤနေရာသည် ၃.၆ လနှင့် ၁၂ လလုံးလုံးဒုက္ခနှင့် bullshit ကိုဖြတ်သန်းရကျိုးနပ်မည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပါ။ ဒီဟာကိုကြာကြာမယူရဘူး ၂-၃ လကြာသင့်တယ် ဒါပေမယ့်တစ်နှစ်၊ ငရဲ ၅ နှစ်လောက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါဟာကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းပါစေ၊ ကြက်ကြောင်စစ်သား🙂
ဒီနေ့အခြားမိန်းကလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံပါ။ နှစ်ခါ၊ ကွန်ဒုံးဖြင့်မိနစ် ၃၀ သာခြားပြီးကွန်ဒုံးပါရှိသည် (ကျွန်ုပ်သည်လူ ၄၀ ဖြစ်သည်) ဒါကြောင့်တင်းကြပ်စွာပြော, ကွန်ဒုံး 30 နှင့်အတူ
အားလုံးစိုက်ထူအလွန်ကောင်းတဲ့နဲ့ Hard မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမပြဿနာနှင့်အတူထိန်းသိမ်း, မိန်းကလေးအပြည့်အဝပါမြင်ကွင်းထဲမှာပေါ်တွင်တင်ကွန်ဒုံး (အမြဲငါ့အဘို့အန္တရာယ်အချက်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြု), အကွန်ဒုံးငါဖို့အသုံးပြု (ပေါ်ခဲ့တခါတောင်မှအထဲတွင်ချပြီးငါ့အချိန်ယူပြီး တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး) ကိုလျှင်မြန်စွာအလံတင်သည့်စိုက်ထူပြန်လည်မျှော်လင့်ထဲမှာရယူပါ။
အိုး, နှင့်လိင်ကယ့်ကိုကြီးမြတ်ခံစားရတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်သက်လုံးအတွက်ကွန်ဒုံးကိုကျွန်တော်ပျော်ရွှင်စွာသုံးနိုင်ခဲ့တယ် - တစ်ခါမှမခံစားဖူးတဲ့လိင်နဲ့တူတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါကြက်ထဲမှာပိုပြီးထိခိုက်လွယ်တာသေချာတယ်၊ ငါကညင်ညင်သာသာဆုပ်ကိုင်ထားတယ်၊
ED အကြောင်းကိုမေးမြန်းတဲ့သူတွေအတွက် - ငါမှာကြိုတင်မကပ်ထားသော ED ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဆိုလိုတာကငါ ED ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ အထူးသဖြင့်ကွန်ဒုံးသုံးဖို့လိုမယ်ဆိုတာငါသိရင်လိင်ကိုတောင်မသွားဘူး။ တကယ်တော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တောင်တောင်မလိုက်ခဲ့ဘူး။ လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်သည်ပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တစ်စုံတစ်ရာသောအိပ်ရာပေါ်သို့တက်ခဲ့သော်လည်းအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါဒီမှာငါ့လမ်းရှာတွေ့သောအခါပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းတို - ဟုတ်တယ်၊ ငါကကြောက်လို့လိင်ကိစ္စကိုရှောင်မသွားဘူးဆိုရင် ED ပိုများတာပေါ့။
သူတို့ရဲ့ပုံပြင်များ / အတှေး / ဉာဏျပညာကိုမျှဝေခဲ့သူလူတိုင်းတဖန်ဒါအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်!